काठमाडौँको ट्राफिक जाम किन बदनाम ? – Sulsule
शंकर मान सिंह २०७८ माघ ६ गते ११:५८ मा प्रकाशित
काठमाडौं । विश्वभर नै ट्राफिक जामको समस्याले अहिले विकराल रूप लिइरहेको छ । विकासोन्मुख मात्र नभएर विकसित मुलुकका बासिन्दा पनि ट्राफिक जामका कारण समस्याग्रस्त छन् । नेपालको न्यूरोडदेखि अमेरिकाको न्यूयोर्कसम्म ट्राफिक जाम सबैका लागि चिन्ता र चासोको विषय भएको छ । निर्धारित समयमा गन्तव्यमा पुग्न नसक्नु ट्राफिक जामले निम्त्याउने मुख्य समस्या हो । ट्राफिक जामकै कारण यात्रुले ठूलो मानसिक तनाव समेत भोगिरहेका हुन्छन् जसको कुनै लेखाजोखा नै गर्न सकिन्न । जहाँ समस्या हुन्छ, त्यहाँ समाधानका विकल्प पनि हुन्छन् भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।
स्मरणीय छ, सरकारले नयाँ बानेश्वरमा अन्डरपास र माइतीघर–थापाथली खण्डमा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने कुरा लामो समयदेखि गर्दै आएको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कलंकीमा देशकै पहिलो आठ सय मिटर अन्डरपास खुलेपछि उक्त क्षेत्रमा हुने जाम ८० प्रतिशतले कम भएको ट्राफिक प्रहरीको दाबी छ ।
वाग्मती अञ्चलमा दर्ता भएका सवारीसाधनको संख्या नौ लाख २१ हाजर नौ सय १७ मोटरसाइकल, १२ हजार छ सय १६ बसहरू एक हजार तीन सय ४३ माइक्रो बसहरू दुई लाख २३ हजार दुई सय २२ ट्रक र टिपर १० हजार छ सय ५४ क्रेन र उत्खननकर्ताहरू एक लाख ५४ हजार चार सय ४३ कार र जिपहरू दुई हजार पाँच सय २५ टेम्पो रहेको तथ्यांक छ ।
काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रभावकारी उपाय नहुँदा पनि सवारीसाधनको चाप बढेको छ । काठमाडौँको ट्राफिक जाम किन बदनाम ? यो प्रश्नको उचित जवाफ पाउनु जरुरी छ । काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा गुड्ने सवारीसाधनको संख्या लगातार बढ्दै गएको छ भने सडकको लम्बाइ भने उस्तै छ । बढ्दो ट्राफिक जाम काठमाडौँमा बस्ने सबैको साझा समस्या हो ।
उपत्यकामा ट्राफिक जामबाट दैनिक लाखौँको संख्यामा पीडित हुनेहरू छन् । काठमाडौँको लामो, थकाइलाग्दो र निस्सासिने ट्राफिक जामबाट सबै क्षेत्रका मानिस प्रभावित छन्। जता जानुभयो, ठूलो संख्यामा सवारीसाधन लाइनमा उभिएर स्वागत गरिन्छ, जसले गर्दा पैदलयात्रुलाई बाटो काट्न समस्या हुन्छ । काठमाडौँमा, तपाईँलाई सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गरेर समयमै नजिकको कतै पुग्नुपरेमा तपाईँको सामान्य तालिकाभन्दा ४५ मिनेट अगावै बाहिर निस्कन सल्लाह दिएको देखिन्छ  ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सवारीसाधन लाइन लाग्ने हो भने उपत्यकाका सडकको कुल लम्बाइभन्दा लामो लाइन हुने गरेको छ । महाशाखाको प्रतिवेदनमा कुल सडकको लम्बाइ ४५ लाख फिट रहेको छ भने उपत्यकामा सबै सवारीसाधनको एकल लाम ७२ लाख फिट पुग्ने अनुमान गरिन्छ  ।
सार्वजनिक यातायातमा जनताको विश्वासको कमी चालक र सहचालकको अव्यवस्थित व्यवहार, क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढ्ने र विभिन्न ठाउँमा लामो समयसम्म रोकिनेजस्ता कारणले गर्दा मध्यम तथा उच्च मध्यमवर्गीय मानिसले आफ्नै सवारीसाधन चलाउन रुचाउँछन् । ठूलो संख्यामा जनताले यातायातको साधनको स्वामित्व रोज्नुको अर्को मुख्य कारण भनेको सार्वजनिक सवारीसाधनहरू आवतजावत गर्न सहज नहुनु हो– तिनीहरू भीडभाड र निःसन्देह छन्। ट्राफिक प्रहरीको प्रतिवेदनमा काठमाडौँ उपत्यकामा साझा यातायातजस्ता ठूला र सुविधाजनक सार्वजनिक बस ६ प्रतिशत मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । महाशाखाका अनुसार वाग्मती अञ्चलमा १ करोड ७० लाख सवारीसाधन दर्ता छन् ।
केही पैदलयात्रीमैत्री सडकहरू उपत्यकाका धेरै सडक खण्डहरूमा पैदल यात्रुहरू हिँड्ने ठाउँ नै छैन। फुटपाथ नहुँदा मानिसहरू आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर सडकमा हिँड्न बाध्य छन् । पैदलयात्रुलाई झनै कठिनाइ थप्दै कार्यालयको समयमा उपत्यकाका प्रमुख स्थानका फुटपाथ सडक बिक्रेताले ओगटेका छन्, जसले पैदल यात्रुलाई सडकमा हिँड्न बाध्य पारेको छ ।
उपत्यकाका सबै ट्राफिक बत्तीले काम गरेमा ट्राफिकको आधा जनशक्ति परिचालन गरे पुग्छ । सबै ट्राफिक लाइटहरू राम्रो अवस्थामा सञ्चालन भएमा उपत्यकाको ट्राफिक जाम ४० प्रतिशतभन्दा बढी कम हुने अधिकारीहरू बताउँछन् ।
साथै कोटेश्वरको जडीबुटीलगायत ग्वार्कोको सडक सधैँ ‘दिनको कुनै पनि समय’ ट्राफिक जामको लागि निकै लोकप्रिय छन् । चक्रपथमा आठ लेनको सडक बनाई क्रसिङमा फ्लाइओभर्, अन्डरपास समेत नहुनु डिजाइन र निर्माणमा नै गम्भीर खोट रहेको देखिन्छ ।
बढ्दो जनसंख्या यी असह्रनीय ट्राफिक जामहरू निम्त्याउने प्रमुख कारक हो । सडकमा सवारीसाधनको बढ्दो संख्यामा मानिसको संख्या बढ्नुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । त्यसैले काठमाडौँका सडकमा आफ्नो क्षमताभन्दा बढी सार्वजनिक र निजी सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्ने प्रस्टै देखिन्छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा वाग्मती अञ्चलमा मात्रै एक करोड ७० लाख सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । सवारीसाधनमा सवार हुनेको संख्या धेरै छ । तर सडकहरू यति साँघुरो भएकाले मोटरसाइकल चालकहरू फुटपाथमा पनि आफ्नो लाइनमा बस्छन्, जसले मानिसहरूलाई हिँड्नबाट रोक्छ। सरकारले सडक विस्तार गरेर लामो ट्राफिक जाम हुन नदिन हरसम्भव प्रयास गरिरहे पनि सबै प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।
चीनको सहयोगमा कलंकीमा निर्माण भएको आठ सय मिटर लामो अन्डरपास काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाको लामो ट्राफिक जाम हटाउन टाइब्रेकर बनेको छ । काठमाडौँको जनसंख्या वृद्धि यहीँ रोकिने होइन, ट्राफिक जामलाई जसरी पनि रोकिनुपर्छ। जामबाहेक, धेरै काठमाडौँवासीहरूको अर्को चिन्ता बढ्दो प्रदूषण हो । आज हामीले चलाउने विभिन्न सवारीसाधनहरू डिजेल र पेट्रोलमा चल्छौँ। तिनीहरूले आफ्नो उच्च कार्बन उत्सर्जनमार्फत वातावरणमा क्षति पु-याउँछन् । त्यसैले सबैभन्दा पहिले सरकारले इन्धनमा चल्ने सवारीसाधनको विकल्पमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ । हाल, विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बिस्तारै बढ्दै गएको छ तर ठूलो लक्ष्य जनसंख्यामा पुग्न सकेको छैन ।
यदि उपयुक्त उपायहरू लिइयो भने, भविष्यमा हामी स्वतन्त्र रूपमा यात्रा गर्न सक्छौँ । र सायद काठमाडौँमा ट्राफिक जाम भएको कुरा पनि इतिहास होस् ।
नेपालमा पेट्रोल र डिजेल निकै महँगो वस्तु हो, यसलाई हामीले जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ । कतिपय मानिसहरू सडक सुरक्षाको बारेमा सोचिरहेका छन् । सुधारिएको सार्वजनिक यातायात र उच्च सवारीसाधनहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि कर्मचारीहरूको लागि कार्यालय यातायातको रूपमा निश्चित विन्दु र रुटहरूमा माइक्रो बस वा अन्य समान सवारीसाधनहरू उपलब्ध गराउने र अधिकतम उपयोगको लागि आवश्यक पर्ने उच्च अधिकारीहरूलाई ट्र्याकिङ प्रणालीसहित कम कारहरू उपलब्ध गराउने। यसले सडकबाट धेरै कार/वाहनहरू कम गर्नेछ । हामीले पक्कै पनि सार्वजनिक यातायातलाई अपग्रेड गर्न आवश्यक छ, तिनीहरू सुरक्षित र आकर्षक हुनबाट टाढा छन् । यात्रु ओसारपसार गर्ने, ओसारपसार गर्ने र विशेषगरी वृद्धवृद्धा र बालबालिकासँग दिनहुँ धेरै घटना हुने गरेको छ । यी घटनाहरू न त रिपोर्ट गरिएका छन् र/वा रेकर्ड गरिएका छन्, त्यसैले कम दुर्घटना तथ्यांकहरू छन् ।
ट्राफिक जामको समाधानका लागि हामीले (अधिकारी) सडक चौडा गर्दै आएका छौँ । तर, यो विल्कुल समाधान होइन भन्ने कुरा ग्वार्कोको जामले देखाएको छ । बरु, त्यसो गर्दा, यसले थप ट्राफिक समस्यालाई निम्तो दिन्छ । अर्को समस्या भनेको हामीले यातायात व्यवस्थालाई सवारीसाधनको व्यवस्थापनमा मात्र सीमित राखेका छौँ । त्यसैका आधारमा सरकार र प्राधिकरणले सडक, ट्राफिक बत्तीजस्ता पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् । सबै सवारीसाधनका लागि आठ लेनको चक्रपथ निर्माण भइसके पनि साइकलका लागि लेन र पैदल यात्रुका लागि फुटपाथ छैन ।
काठमाडौँका अधिकांश मानिसको आवतजावतको औषत दूरी पाँच किलोमिटरभन्दा कम छ । यसका लागि कस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यसैगरी उनीहरूले कसरी यात्रा गर्छन् भन्ने पनि अध्ययन गर्नुपर्छ । र, समग्रमा यातायात व्यवस्थालाई दिगो बनाउनुपर्छ । ट्राफिक जामको समस्या पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न निकै कठिन हुने भए पनि केही सरल उपाय अपनाएमा निकै हदसम्म यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ ।
राजस्वको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको गाडीको आयातले पनि यो समस्यालाई थप कठिन बनाएको छ । हरेक वर्षनयाँ गाडी थपिँदै गर्दा बाटो साँघुरो हुँदै गएको महसुस सबैले गरेका छन् । काठमाडौँमा भएको एउटा माात्र बाटो अलि फराकिलो पनि पार्न नसक्ने र अन्य विकल्प, जस्तै– (ओभरहेड) फ्लाइओभर र भूमिगत मार्गको व्यवस्था होइन, कल्पनासमेत गर्न नसक्दा हामीले साँघुरो बाटोको समस्या समाधान गर्न सकेका छैनौँ ।
यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेका धेरै देश र सहरबाट पाठ सिकेर केही कदम चाल्न सकेमा राहत पाउने आशा गर्न सकिन्छ। धेरै युरोपेली देशले हामीभन्दा अगाडि यस्तै जामको समस्या बेहोरेका थिए । तर प्रभावकारी नीति तथा तिनको कार्यान्वयनका कारण ती देशमा जामको समस्या धेरै हदसम्म अन्त्य भएको छ ।
आज संसारमा नै ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि सडकको निर्माणका साथसाथै सार्वजनिक सवारीसाधनको राम्रो विकास र यसको क्षमता वृद्धि नै उपयुक्त माध्यम मानिएको छ । विकसित राष्ट्रमा सवारीसाधनको राम्रो व्यवस्था हुँदा त्यहाँको ट्राफिक समस्या हल भएको देखिन्छ । हरेक निर्वाचित प्रतिनिधिको पहिलो प्राथमिकता यातायातको विकास नै हुन्छ । तर, यो क्षेत्रको विकास जति हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । सवारी संख्याको वृद्धि वार्षिक दुई सय पाँच प्रतिशतभन्दा धेरै छ । त्यो अनुपातमा न सडक सञ्जालको विकास हुन्छ, न व्यवस्थापनमा सुधार हुन्छ ।
सुझावहरू : ट्राफिक जाम कम गर्न केही सुझावमा ३० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको सहरमा रेल चलाउने र सामूहिक (मास) ट्रान्सपोर्ट प्रणाली विकास गर्ने, योग्य र अनुभवी यातायात प्रशासनको प्रबन्ध गर्ने, बसपार्क र बसको समयतालिका निर्धारण गर्ने, विद्युतीय÷ वैकल्पिक ऊर्जाको अवधारणाअनुरूप यातायात सञ्चालनमा जोड दिने, यातायात क्षेत्रमा श्रम कानुनको कार्यान्वयन एवं सुधार गर्ने, यातायात क्षत्रेका श्रमिकहरूको रोजगारी, वृत्ति विकास र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने, रिक्सा, ठेलागाडा र ट्र्याक्टरलाई राजमार्गमा प्रवेश निषेध गर्ने, संस्थागत र कम्पनीमार्फत मात्र ट्याक्सी सञ्चालन गर्ने, मोटरसाइकल यात्रुको हेल्मेटको राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको बनाउने, मोटरसाइकलपछाडि सवार यात्रुले पनि हेल्मेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने, सडकहरूको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने र लागू गर्ने, गुणस्तरयुक्त ड्राइभिङ स्कुल सञ्चालन गर्ने, ट्रिपरलगायतका ठूला सवारीसाधनका लागि उपयुक्त सडक निर्धारण गर्ने र समय तालिकामा मात्र चलाउन दिने, साइकल सञ्जाल विकास गर्ने, पैदल मार्ग बनाउन जोड दिने, आवश्यकताअनुसार आकाशे पुल, जेब्राक्रसिङ, ट्राफिक बत्ती, आदिको व्यवस्थापन गर्ने, यातायातमा सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने, कम्पनी ऐनअनुरूप सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय सडक सुरक्षा बोर्ड बनाउने रहेका छन् ।
साथै, विद्यालय र क्याम्पसलाई सकेसम्म गाडीमुक्त क्षेत्र बनाउने, हरेक नगरपालिकामा कम्तीमा एउटा ‘अटोल्यान्ड’को विकास गर्ने, स्मार्ट सिटीको अवधारणाअनुरूप योजना बनाउने, निर्माणकार्य एवं निर्माण सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, यातायातसम्बन्धी विद्यमान ऐन कानुनको कार्यान्वयन एवं सुधार र परिमार्जन गर्ने आदि प्रमुख छन्  ।
पुराना सवारीले सडकमा जाम मात्र होइन, प्रदूषणसमेत बढाइरहेका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय माइक्रो, टेम्पो, साना बस तथा कम यात्रु क्षमताका साना सवारीसाधन ह्वात्तै बढेका छन् । राजधानीमा साना तथा कम यात्रु बोक्ने सार्वजनिक यातायातको सट्टा ठूला धेरै यात्रु अट्ने बस चलाउनु आवश्यक र अनिवार्य भइसकेको छ ।
ट्राफिक जामको समस्या समाधान गर्न विश्वभर अपनाइएका अनुभवको अध्ययनका आधारमा केही सुझावहरू :
विद्यालयबसको व्यवस्थापन– वर्षौँपहिले बेलायतको राजधानी लन्डन (अन्यदेशमा समेत) मा विद्यालयबसहरूको नियमन गरी सजिलै सवारी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्दा धेरै मानिस अचम्मित र स्तब्ध भए। त्यसो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा केही वर्षमा प्रमाणित पनि भयो । त्यहाँ विद्यार्थीको ठेगानाअनुसार उनीहरूलाई नजिकैको विद्यालयमा भर्ना गरियो जसका कारण अधिकांश विद्यार्थीलाई यातायातका साधन प्रयोग गर्नै परेन । यसबाट ट्राफिक जामको समस्या नै परेन भने शिक्षामा पनि समानता भेटियो । स्थानीयले आफ्नो आसपास सञ्चालित विद्यालयहरूको गुणस्तरमा पनि विशेष ध्यान दिन थाले ।
हाल उपत्यकामा तीन हजार विद्यालय सञ्चालनमा छन् र तिनमा करिब आठ लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । जसमध्ये दुई लाखले स्कुलको सवारीसाधन प्रयोग गर्छन् । जम्मा छ हजार बसले दिनमा दुईदेखि छ ट्रिप गर्दा ३० हजार ट्रिप गर्नेगरेको पाइन्छ । सालाखाला एउटा ट्रिपमा दुई घण्टा बिताउँदा पनि दैनिक ५० हजारदेखि ७० हजार घण्टा बसहरू बाटोमा कुदिरहेका हुन्छन् । त्यसमा यात्रा गर्ने कलिला बालबालिकाहरू आफ्नो अध्ययन, खेल्ने र मनोरञ्जन गर्ने समय खर्चेर बाटोमा अनावश्यक ट्राफिक जामको सकसमा पर्न बाध्य छन् । जब स्थानीयस्तरमा विद्यालय व्यवस्थापन हुन्छ, बस चढ्ने कुरा अन्त्य हुनेछ। एकातिर घरमा अभिभावकहरू छोरा–छोरी कुरेर बस्ने अर्कोतिर बाटोमा अबोधहरू ट्राफिक जाममा तड्पिने परम्परा अन्य हुनेछ। आर्थिक बचत हुनुका साथै बालबालिकाको समय बचत भई उनीहरू अन्य फलदायी काममा संलग्न हुन समेत सक्छन् ।
एक्सप्रेस (द्रुत) मार्ग– हाल सार्वजनिक सवारीसाधन चढेर घण्टौँ रोकिँदै गन्तव्यमा पुग्न कठिनाइ बेहोरिरहेका यात्रुले जब द्रुत मार्गबाट विनाअवरोध आवतजावत गर्न पाउने कल्पना गर्नेगर्छन्, आफैंमा प्रश्न गर्छन्– के काठमाडौँमा यस्तो सुविधा सम्भव छ र ? धेरै पैसा खर्च गर्ने क्षमता के हाम्रो छ त ? यीसँगै कुतुहलता हुन सक्छ ।
अपर्याप्त र अव्यवस्थित पार्किङ व्यवस्था उपत्यकामा व्यवस्थित पार्किङस्थल नहुँदा दैनिक सयौँ सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन सडक छेउमा जथाभावी पार्किङ गर्नेगरेको देखिन्छ । ‘नो पार्किङ’ भनेर चक्कामा चाबी वा फुलीभन्दा यस पार्किङको ठाउँ बढाउन जरुरी छ । (आर्थिक दैनिकबाट)